Vhudzi Revanhu Wigs Vagadziri | Fayuan
Yakanakisa vanhu vhudzi wigs vanogadzira fayuan
Mhandara Yevanhu Bvudzi
Malaysian Bvudzi Revanhu
Bvudzi reMunhu reBrazil
Indian Bvudzi Revanhu
Peruvia Vhudzi Revanhu
Yakazara Lace Wig
Vagadziri Vhudzi Revanhu Vagadziri
Tine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvinotiita imwe yekambani yepamusoro yebvudzi revanhu, zvigadzirwa zvedu zvakakurumbira kutenderera pasirese kubva kuBrazil, India, Vetnam kuenda kuFrace, Africa kuenda kuUSA uye imwe kambani yepamusoro muChina.
Chinangwa chedu ndechekugutsa vatengi vedu nehupamhi hwakanyanya uye hwakavimbika mhando yekuona kuti mutengi wese anogona kunzwa akasununguka uye aine chivimbo nemidziyo yedu mumashandisirwo avo.Zvinhu zvedu zvinowanikwa zvakanyanya kuwana kwavo kushandiswa kubva kumusika nekuda kwezvinhu zvakanaka. Ivo vane akawanda maficha ayo anobvumidza kufarirwa uye kushandiswa.
Yakanakisa Giredhi Natural Wave
Inobvumidzwa zvakapetwa kaviri, kusona kunorema 100 gramu pane bhegi
Mhandara Yakanangana Chaizvo Giredhi Bvudzi
Kurema 400 Giramu, Sampula Order Gamuchirwa, Kuendesa Nguva 2-3 Bhizinesi Mazuva
Akarurama Bvudzi Revanhu
Isu Takarongeka muBvudzi reBrazil, Bvudzi rePeru, Bvudzi rekuMalaysia, Bvudzi reIndia, Weave Bvudzi Uye Kuvhara Bvudzi.
Curly bvudzi mannequin inotungamira Lace Frontal Wig
Bvudzi Giredhi 12A, Bvudzi Rudzi Rwezvakaita Rudzi, Bvudzi Kureba 12-30 inch 100% curly bvudzi mannequin misoro yakapfava, yakasimba uye yakakodzera kutenga, iyo yakakodzera kune vanotanga uye vhudzi vhudzi. Bvudzi Giredhi 7A, 8A, 9A Uye 10A (Kaviri Kuderedzwa) Vanowanikwa. Rudzi Bvudzi Rese Rakasikwa Colour (Pasina Colouring processing), Rima Colours, Chiedza Colours, Ombre Colors. Kureba kwebvudzi 8 ”~ 30”. Kurema 100G = 3.5OZ Per Bundle kana Yakasarudzika. Sampula Order Yakagamuchirwa, MOQ Is 1 Pack (100G). Kuendesa Nguva Mukati Meawa makumi maviri nemana kana uri muStock, 5 ~ 7 Mazuva kana akagadzirwa. Kutumira Nguva Kazhinji Kurovera, 3-5 Mazuva Ekushanda. Kubhadhara Paypal, Western Union, T / T, Escrow, Mari Gram, nezvimwe. Discount Yese Kune Inowanikwa. Kudzorera mari & kuchinjanisa Kunowanikwa.
Kudonhedza Kutumira Shandira
Ridza kumusoro kwemasumbu ebvudzi kuti uite kuti midzi yebvudzi irambe yakanakira uye yakasimba kuti inoteedzere kugadzirwa. kusona iyo yepamusoro yemasumbu ebvudzi inogadzira muvhudzi weft.sew bvudzi kusona uye kuvhara kana kumberi mune wigs. suka vhudzi, bvisa mafuta ebvudzi neguruva, bvisa bvudzi rakashama, gadzira bvudzi rakapfava uye rakatsetseka. gadzira bvudzi sezvinodikanwa, uye kugadzirisa mapatani ekuita kuti bvudzi riite refu. Isu tinoshandisa fedex AU DHL kuratidza kune kutumira uye mumazuva matatu kusvika manomwe ekushanda iwe unowana yako yekuraira pasuo rako.
Tsigiro kudonhedza kutumira, MOQ chimwe chidimbu.
Tumira mushure mekugamuchira mubhadharo wakazara.
Zita remutengi, kero uye nhamba yefoni zvinogona kushandiswa sekufambisa ruzivo.
Tinogona kudhinda nyore logo logo uye nekuisa pasuru.
Svitsa imwe huwandu hwehuwandu muyero mwedzi wega kana vhiki, tora imwe mutero kana kutumira kwemahara kwemamwe mairairo.
Inogona kupa vatengi vako chipo chidiki (3D mink eyelash.
Fayuan Bvudzi Wigs Kune Zvese Kupfeka
Wigs yekupfeka kwemazuva ese ikozvino dzave sarudzo yemanheru. Vamwe vanhu vanofarira marudzi ese ebvudzi asi havadi kupisa kupisa, saka vanokwanisa kugutsa ivo avo mazano kuburikidza neakasiyana bvudzi wigs kushandiswa kwemazuva ese. Kune vakadzi vazhinji, iyo wigs yekupfeka kwemazuva ese haina kumbosiyana nezvizoro zvavanoshandisa mazuva ese. Zvese zviri zvekushandura chitarisiko uye kuvaita vakanaka. wigs yekupfeka kwemazuva ese inogona kuchinja bvudzi rako maitiro, ayo ari nyore kwazvo uye nekukurumidza. Fayuan Tsitsi wigs yekupfeka kwemazuva ese ndeyemhando yepamusoro, tarisa zvinhu sezvazviri, wakasununguka kupfeka, uye wedzera zvishoma mafashoni. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve fayuan bvudzi bvudzi wigs yekushandiswa kwemazuva ese, ndapota taura nesu.
Bvudzi chairo Wigs kune Bvudzi Dema
Nekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu mararamiro, wigs yakapinda zvishoma nezvishoma muhupenyu hwevanhu uye zvishoma nezvishoma kuve iyo inofanirwa-kuve yeiyo fashionistas. Fayuan Bvudzi, iyo fashoni wig rudzi, inopa chaiyo bvudzi wigs kune bvudzi dema. Wigs inoenderana zvakawanda, yakakodzera kune varume, vakadzi uye nevana zvakafanana. Vanhu vese vanoda runako rwakakodzera. Bvudzi rinoita basa rakakosha mumufananidzo uzere wemunhu. Masitaira ebvudzi anotaridzika zvakanaka pane zvese. Zviri pachena, chimiro chebvudzi chinokukodzera chakakosha. Iwo chaiwo bvudzi wigs kune bvudzi dema rakagadzirwa naFayuan Bvudzi ndiwo matema wigs anotarisa chaizvo. Inonzwa yakatsetseka uye yakapfava kubata, vhudzi nyowani uye rakashongedzwa, iko kwekufungidzira kwakakwira, inogona zvakare kuvezwa uye yakagadzirwa neshungu pakuda, uye zvakare iri nyore kwazvo kutora hanya.
Curly Wig Na Curly Bang Kune Fayuan Bvudzi
Fayuan Bvudzi inyanzvi yevhudzi vhudzi kugadzira. The curly wig ne curly bang yakagadzirwa naFayuan Bvudzi haina kungochinja mufananidzo wedu, asi yakaunza zvakareruka uye mikana muhupenyu hwedu. Nekuti kune vakadzi vanofarira runako, wigs yebvudzi remunhu rinoshanda kwazvo muhupenyu. Unogona kuva nebvudzi raunoda raunenge usinga vhure bvudzi rako kana kushandisa nguva yakawanda.Shure kunge mahombekombe akakomberedzwa, vamwe vakadzi vane bvudzi pfupi pane dzimwe nguva vanoda kuchinja mapfekero avo, hombe curly wigs ndeye sarudzo yakanaka. Mazuva ano, curly wig ine curly bang vava maitiro efashoni, kupfeka kunogona kuratidza kunaka kwehunhu. Sarudza Fayuan Bvudzi rakapetwa wig ne curly bang kuti uwedzere maitiro asina kujairika uye akanaka kwauri.
Pfupi Wavy Wigs Kune Fayuan Bvudzi
Pfupi wavy wigs ndeye haircot inotetepa, mazhinji ayo anopa vanhu kunzwa kwakachena uye kwakachena. Kana iwe uchida kuita kuti bvudzi rako pfupi rioneke rakanaka uye rakanaka, edza pfupi wavy wigs yebvudzi revanhu. Fayuan vhudzi vhudzi wigs mapfupi mafashoni ane mavara akanaka uye zvakasikwa kupfeka, kupa inozorodza uye inokwanisa kunzwa. Mukuwedzera, mhedzisiro yeiyi pfupi wavy wigs ndeyechokwadi chaizvo, uye hapana kuomarara mune iyo wigs. Fayuan Bvudzi rave riri kuita muvhudzi rekugadzira vhudzi remunhu kwemakore makumi maviri nemasere uye ane ruzivo rwakakura mukuvandudza kwe wig nekutsvaga. Yakavimbika mhando ye wig yega yega, iyi pfupi curly wig haina mutsauko. Sarudza Fayuan Bvudzi, gadzira bvudzi remunhu wigs, seyi pfupi wavy wigs inonyanya kurongeka uye yakasikwa, kuti iwe ugone kupfeka pasina kunetseka.
Isu tiri fayuan Human Tsitsi kambani yakavakirwa kuGuangzhou yeChina kubva makore gumi nematatu apfuura uye tiri kugadzira kugadzira Natural Natural Human Tsitsi uye zvigadzirwa zvakagadzirwa nemhandara yevhudzi vanhu sevanhu Bvudzi Revanhu Kuwedzerwa uye Weft Machine uye Hand Weft, kuvhara, frontals, extensions, uye Bulk bvudzi rakazara lace wigs pamberi pewigs wigs
Tine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvinoita kuti tiite imwe yekambani yepamusoro yebvudzi revanhu zvigadzirwa zvedu zvakakurumbira kutenderera pasirese kubva kuBrazil, india, vetnam kuenda kuFrance, Africa kuenda kuUSA uye isu tiri imwe kambani yakanakisa muChina.
Chinangwa chedu ndechekuita kuti vatengi vedu vakwanise mubhizinesi iri uye ndosaka isu tichitarisira mhando nekugadzirisa, saka ive shuwa kana uchiita bhizinesi nekambani yedu kuti uri kuwana zvakapetwa 100% yemunhu Bvudzi uye mhando yepamusoro, ndizvo izvo kambani yedu anozivikanwa ne.
Isu tinovimbisa zvigadzirwa zvedu HAVANZVI ZVINONYANYA uye hupenyu hwebvudzi hwakareba kunge hwave hwakachengeta